Diyopost.com :: रोनाल्डो १ सय १२ मिलियन पाउण्डमा ६ वर्षको लागी युभेन्टससंग अनुवन्धित, रियलमा अब को आउला ? रोनाल्डो १ सय १२ मिलियन पाउण्डमा ६ वर्षको लागी युभेन्टससंग अनुवन्धित, रियलमा अब को आउला ? - Diyopost.com
काठमाडौँ । चर्चित फुटबल स्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डोले रियल म्याड्रिड त्यागेको आधिकारिक घोषणा गरेका छन । रोनाल्डो स्पेनिस क्लव रियल म्याड्रिडबाट ईटालियन क्लव युभेन्टस प्रवेश गरेका हुन । केही समय अगाडी बाट नै रोनाल्डोलाई युभेन्टसमा ल्याउने तयारी भएपनि विश्वकपको कारणले प्रक्रिया अगाडी बढाउन ढिला भएको युभेन्टसका म्यानेजरले संचारमाध्यम हरुलाई जानकारी दिएका छन ।
रोनाल्डो १ सय १२ मिलियन पाउण्डमा युभेन्टससंग अनुवन्धित भएका हुन । उनले यसभेन्टससंग ६ वर्षको सम्झौता गरेका छन । रियल छाड्दा निकै भावुक भएका रोनाल्डोले आफ्ना समर्थक र साथिहरुलाई दुखी नहुन आग्रह गरेका छन । उनले युभेन्टससंग अनुवन्धित हुँदै गर्दा आफ्ना समर्थकहरुलाई एउटा पत्र लेखेका छन । जुन पत्रमा आफुले रियलसंगको ९ वर्षे लामो यात्रा टुंग्याउनुपर्दा असाध्यै पिडा भएको महसुस गरेका छन । उनले भनेका छन:
रियल मड्रिड क्लब र मड्रिड शहरसँग बिताएका यी वर्षहरु मेरा जीवन कै सबैभन्दा खुशीका क्षणहरु थिए। यस क्लब र यस शहरप्रति ममा सधै आभारीको भावमात्रै रह्यो। मलाई माया र सद्भाव देखाउने सबैप्रति कृतज्ञ छु।
मलाई के लाग्लायो भने यो मेरो जीवनको नयाँ चरणमा प्रवेश गर्ने समय हो र मैले क्लबलाई मेरो सरुवाको अनुरोध ग्रहण गरिदिन भनेको थिएँ। हाम्रा समर्थकसँग म अनुरोध गर्दछु कि कृपया मलाई बुझिदिनुहोस् ।
मैदानमा अनि ड्रेसिङ रुममा म सधैँ उत्कृष्ट सहकर्मीहरुले घेरिएको हुन्थेँ। हामीले पाँच वर्षमा चार पटक अनि लगातार तीनपटक च्याम्पियन्स लिग जित्दा समर्थकहरुको न्यानो र अविश्वसनीय मायाँ पायौँ।
व्यक्तिगत रुपमा पनि यस उत्कृष्ट र असाधारण क्लबमा रहँदा मैले ४ गोल्डेन बल र ३ गोल्डेन बुट जितेँ। यो उपलब्धिप्रति म निकै सन्तुष्ट छु।
सबैलाई धन्यवाद अनि, ९ वर्ष अघि यहाँ आउँदा स्टेडियममा मैले भनेको शब्द दोहोर्‍याउन चाहन्छु ।
रोनाल्डो युभेन्टस प्रवेश गरेसंगै अब रियल म्याड्रिडमा को आउछ भन्ने कुरा हेर्न बाँकी नै छ । केही समय अगाडीमात्रै वार्सिलोनाबाट पिएसजी प्रवेश गरेका ब्राजिलियन फुटबल स्टार नेयमार रियल म्याड्रिड आउने संकेत गरिएको थियो । उता पिएसजीले भने अहिले नेयमारलाई अन्य क्लवमा पठाउन नसकिने बताएको थियो । व्यक्तिगत रुपमा नेयमार रियलमा अनुवन्धित हुन निकै आतुर रहेको देखिन्छ ।